Mudaaharaad Wayn Oo 30ka Bisha Ka Dhacaya Xafiiska Ra'iisuwasaaraha Cusub Ee Ingiriiska.
Waxaa wadanka Ingiriiska ka socda qabanqaabo loogu jiro Mudaaharaad wayn oo lagu qabanayo banaanka hore ee xafiiska ra'iisuwaasaraha cusub ee Ingiriiska Gordon Brown. Mudaaharaadka ayaa
dhacaya sodonka bisha June ee inagu soo aadan taasoo ah maalinta Sabti ah. Mudaaharaadka oo ay kasoo qaybgalaan dhamaan qaybaha kala duwan ee Bulshadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska ayaa wuxuu bilaabanayaa 2:00pm isagoo socon doona ilaa 5:00pm.
Mudaaharadan ayaa qayb ka ah olole balaaran oo ay jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ugu jirto sidii dawladda Ingiriiska loogu cadaadin lahaa in ay Gumayisga Itoobiya culays ku saarto inuu dalka Soomaaliya isaga baxo. Wuxuu kaloo mudaaharaadku cabirayaa dareenka ay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ka qabaan gumaysiga kusoo duulay dalkoodda, kaasoo ay ugu muujinayaan madaxda dalka Ingiriiska in ay maqlaan oo ay tixgeliyaan cabashadda qayb ka mid bulshadda Ingriiska oo asalkoodu Soomaalidda yahay.
Hadaba Codkaadu waa culays ee ku cadaadi xukuumadda cusub ee Ingiriiska.
Aamusnaantu waxay calaamad u tahay raali ahaansasho ee xumaanta carabkaadda ku diid oo dalkaada waxa ugu yar ee aad ugu dhiidhi karto ha ka bakhaylin.
Hankaadu yuusan ka hoosaynin ninka 3da sano cabashadda duulaanka Ciraaq la horfadhiya barlamaanka Ingiriiska.
Hadaba Balanteednu waa banaanka hore ee
No: 10 Downinga Street
Sabtiga 30ka June
2:00pm ilaa 5:00pm
la xiriir: CabdiRaxman Warsame